वृतासुर - विकिपिडिया
१ वृतासुरको उत्पत्ती
२ देवराज ईन्द्र र बृतासुरको लडाई
३ बृतासुरको बध
४ वृतासुरको पूर्व जन्मको कथा
५ बाहिरिय लिङ्कहरू
वृतासुरको उत्पत्ती[सम्पादन गर्ने]
एक पटक स्वर्गका राजा इन्द्र र देवताहरूका गुरू वृहस्पती बीच तालमेल न मिलेका कारण देवराज इन्द्रले गुरू वृहस्पतीलाई छोडेर त्वष्टा पुत्र विश्वरूपलाई आफ्नो गुरू मानेका थिए। विश्वरुप असुर खानदानको थिए उनले नारायण कवच पाठ गरेर देवत्व प्राप्त गरेका थिए। एक दिन देवराज इन्द्रको यज्ञामा ऋषी विश्वरूपले इन्द्रको आँखा छली आफ्ना गोत्री खलक असुरहरूको पनि भाग लगाएको देखेर देवराज इन्द्रलाई रिश उठ्यो। यसैकुरालाई लिएर देवराज इन्द्रले त्वष्टा पुत्र विश्वरूपको हत्या गरिदिए। यसरी आफ्ना छोराको हत्या गरेकाले त्वष्टाले इन्द्रको बध गर्ने छोरो पैदा हवस् भन्ने माग राखेर पुत्रेष्ठी यज्ञा गर्न थाले। त्वष्टा ऋषी निकै तपस्वी थिए। उनको तपस्याको प्रभाव देखेर यज्ञाग्नी देखी एर पुत्र उत्पन्न भयो त्वष्टाले उनको नाम वृत राखे। यसरी यज्ञाग्नीबाट उत्पन्न भएका वृतले त्वष्टालाई प्रणाम गरेर मैले के गर्नु पर्ने भयो पिता आज्ञा हवस्, तपाइँको आज्ञा पाएमा म आखाशका ग्रह र तारा जमिनमा झार्न सक्छु, यो पृथ्वीलाई उडाइदिन सक्छु, समुंद्रलाई सुकाइदिन सक्छु भनेर त्वष्टालाई खुसी गराउनको लागि साहस देखाउन थाले। यसरी आफ्नो पुत्रले साहस देखाएकोले त्वष्टाले पनि वृतलाई देवराज इन्द्रको बध गर्ने आज्ञा दिए।
त्वष्टाको आज्ञा पाएर बृतासुरले देवराज ईन्द्रको बध गर्ने बर प्राप्तिको लागि ब्रह्मा र शिवजीको घोर तपश्या गरे। उनी असुर भए पनि एक ब्रह्म ज्ञानी महाँ पुरुष थिए। उनको तपश्याबाट खुसी भएर ब्रह्मा र शंकरले उनलाई देवराज ईन्द्रलाई विजय गर्ने बर दिएका थिए। बर पाई सकेपछी उनी देवराज ईन्द्रसँग यूद्ध गर्न लागे आखिर देवतारुले बृतासुरको शेनासँग लड्न नसकेर स्वर्ग छोड्नै परेको थियो। बृतासुरसँगको लडाईँमा हारेर स्वर्गको राज गद्दीबाट पद्यूचित भएका देवराज ईन्द्र सहितका सबै देवताहरूले हजारौ वर्ष पृथ्वीमा भट्किरहनु परेको थियो। हजारौ वर्षको दु:ख झेलाई पछि देवताहरू ब्रह्माजी र शंकरजीसँग मद्दत माग्न क्रमशः ब्रह्मलोक र कैलाश पर्वतमा पुगे। ब्रह्माले र शिवजीले देवताहरूलाई यथा सम्भव सम्झाएर सबै भगवान विष्णु भए ठाउँ "बैकुण्ठ धाम" गए। ब्रह्मादी देवताहरूले भगवान बिष्णुसँग प्रार्थना गरेर भनेकी "प्रभु ! त्वष्टा पुत्र बृतले हामीलाई स्वर्गबाट निकाली दियो आफू स्वर्गको गद्दीमा बसेर हामिहरू सबैमाथी आफ्नो हुकुम चलाउन लाग्यो। हामी बरुणादी ३३ कोटी देवता सूर्यादी ९ ग्रह सबै उसैको अधिनमा बाद्येतावस चल्नु परिरहेको छ। यसै भयो भने सृष्ठीको बिनास हुने छ। कोही उपाए निकाल्नु होस्।" भनि प्रार्थना गरे। यो सुनेर भगवान बिष्णुले देवताहरूलाई भनेकी देवताहरू हो! डराउनु पर्ने केही कुरा छैन म यसको उपाय भनि दिन्छु- "तिमिहरू सबै महर्षि दधिचि भए ठाउँ जाउ बृतासुरलाई दधिचिको हाडको बज्र बनाएर बज्रको प्रहारबाट मर्ने श्राप भएकाले ऋषिसँग हाड मागेर त्यसको बज्र तयार गर्न लगाउ त्यो बज्रको प्रयोग गरेर देवराज ईन्द्रले बृतासुरलाई मार्न सक्ने छन्।" भगवान विष्णुको यो कुरा सुनेर सबै देवताहरू मिलेर दधिचि आश्रम गएर उनको हाड मागे। दधिची पनि निकै परोपकारी भएकाले देवताहरूको सामुन्ने आफ्नो प्राण त्यागे। त्यस पछि दधिचिको हाड लगेर देवताहरूले वज्र बनाएर इन्द्रलाई दिए
वृतासुरको पूर्व जन्मको कथा[सम्पादन गर्ने]
वृतासुर असुर भए पनि निकै ज्ञानी र इश्वर भक्त थिए। उनी दानव कुलमा जन्म लिएका भए पनि उनलाई सबै देवर्षी महर्षीहरूले ब्रह्म ज्ञानी भनेर चिन्दछन्। उनी त्यस्तो ज्ञानी भएर पनि दानवत्वमा गनिनाको कारण उनको पहिलो जन्मको भाव थियो।  पहिले जन्ममा उनी एक चित्रकेतु नाम गरेका राजा थिए। धेरै समय सम्म राजा चित्रकेतुलाई कुनै सन्तान भएनन्। त्यस पछि ती राजाले आफ्ना गुरूको उपदेश अनुसार पुत्रेष्ठी यज्ञा गरेर उनलाई एक छोरो भयो। केही दिन पछि राजाको छोरा मरेकोले राजा पुत्र शोकमा परेर विलाप गर्न थाले। उनको त्यो हाल देखेर नारदले धेरै सम्झाउनुको साथै राजपुत्रको जिवात्मालाई डाकेर राजासँग कुरा गराए। राजपुत्रले राजालाई आत्मज्ञान दिएर देह छोडे। त्यस पछि राजा चित्रकेतुले आफ्नो राजपाठ छोडेर वनमा गएर तपस्या गर्न थाले। केही दिन पछि राजा चित्रकेतु स्वर्गमा गएर देवताहरूका साथमा सुखसँग रहन थाले। एक दिन चित्रकेतु महादेव दर्शन गर्न कैलाश गए। त्यती खेर उनले भगवान शिवजीलाई पार्वती काखमा राखेर शभामा बसेका देखे। यो देखेर चित्रकेतुले सबैसँग महादेव त लाज नमान्ने रहेछन्, ज्ञानी भएर पनि सबैको सामुन्ने यसरी पत्नीलाई काखमा राखेका छन् भनेर शिवजीको खिल्ली उढाउन थाले। यो देखेर पार्वतीलाई रिस उठ्यो उनले चित्रकेतुलाई तिम्रो दानवको जस्तो मती रहेछ दानव बन्नु परोस् भनेर श्राप दिएकीले ती पछिल्लो जन्ममा वृतासुर बनेका थिए।
↑ १.० १.१ १.२ १.३ १.४ १.५ १.६ १.७ १.८ सुब्बा होमनाथ केदारनाथ कृत सुक सागर
"https://ne.wikipedia.org/w/index.php?title=वृतासुर&oldid=904811" बाट अनुप्रेषित